Tag: ahịa ọma | Martech Zone
Tag: ahịa ọma
5 SaaS Successga nke Ọma nke Ndị Ahịa
Fraịdee, June 12, 2020 Fraịdee, June 12, 2020 Hardik Oza
Oge agafeela mgbe ndị otu ahịa na-azụ ahịa na-ejighị oku na ndị ahịa na-akparaghị ókè rụọ ọrụ. Maka na ugbu a bụ oge iji belata obere ma nata karịa n'ihe gbasara mmeri ndị ahịa. Ihe niile ị chọrọ bụ ụfọdụ atụmatụ aghụghọ, yana ikekwe enyemaka sitere na ụlọ ọrụ mmepe ngwa SaaS. Mana, ọbụlagodi tupu nke ahụ, ihe niile na-agbadata ịmara ezigbo omume maka ọfụma ndị ahịa. Mana nke mbu, o doro gi anya na imara okwu a. Ka anyị
You Bụ Onye Na-ahụ Maka Ndụmọdụ Social Media?
N'abalị ụnyaahụ enwere m ohere dị egwu ịga ma zute ma gee onye mmeri Indianapolis 500 oge, Helio Castroneves. Abụ m onye ọbịa nke onye na-elekọta ndị ọbịa na onye nchịkwa ọrụ David Gorsage, onye jụrụ ma m ga-eweta mmelite mgbasa ozi mmekọrịta na mmemme ahụ niile. Ka m na-ahazi hashtags, soro ndị na-akwado ya, wee mata ndị VIP nọ n'ime ụlọ ahụ, otu ọkachamara na-agba ọsọ gbadara jụụ wee jụọ, sị: you bụ onye na-ahụ maka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ? Na
Anyị na ndị na-ahụ maka ahịa ahịa, Bolstra, amalitela njikọ aka ọhụrụ. Bolstra bụ ngwanrọ ngwanrọ (SaaS) na-eweta maka azụmaahịa na ụlọ ọrụ azụmaahịa na-achọ ịba ụba ego ha na-enweta site na mbenata ọkụ na ịchọpụta ohere dị elu. Ihe ngwọta ha, site na iji omume kacha mma, na-enyere ụlọ ọrụ gị aka ị nweta nsonaazụ chọrọ nke ndị ahịa gị chọrọ. N'ime afọ ole na ole gara aga, ka njem njem agile anyị gbanwere ma anyị na-atụle ntozu oke nke azụmaahịa azụmaahịa
Nweta ihe omuma: Nzube nke ndi ahia na njigide
Tuzdee, Machị 18, 2014 Tuzdee, Machị 18, 2014 Douglas Karr
Gainsight weputara oge opupu ihe ubi nke usoro ihe omuma nke ndi ahia ya, nke mere ka odi nfe karia ndi ahia ka ha nweta ihe nlere anya nke 360 ​​Celsius ma soro ndi ozo ndi nwere ihe ịga nke ọma na ndi ozo n’enye ha ikike n’oru nyocha. Na ụlọ ọrụ buru ibu ebe ọtụtụ ngalaba dị iche iche - site na ahịa gaa na mmepe ngwaahịa na ire ere - ndị ahịa na-ama aka na isi ihe data dị iche iche gbasara ọrụ ndị ahịa, mana ha ga-agba mbọ ijide ndị ahịa